एक रात दुइ कथा...
ma tamarchu ki kyaho 3868 days ago
Jhapali_Thito 3868 days ago
fucheketo 3864 days ago
password 3864 days ago
kukhura chor 3864 days ago
khushii 3864 days ago
perika 3864 days ago
ramronepal 3864 days ago
fucheketo 3863 days ago
crazy_love 3863 days ago
perfectionist 3863 days ago
password 3863 days ago
perika 3863 days ago
Jhapali_Thito 3863 days ago
nepwanted 3862 days ago
khushii 3862 days ago
KAledai 3861 days ago
STUPIDA 3861 days ago
fucheketo 3855 days ago
More by fucheketo
पुल्चोक खाने कथा
खोइ गजल बन्यो बनेन?(भाग-१)
मनोजले छोडेको कथा
यो कथाको अन्त्य छैन
फूल बेच्ने केटी
सुधाले नपढेको सुधाको कथा
प्रिये तिमीले यो पत्र नपाएपनि(दोस्रो पत्र)
मलाई नलागेको रोग
उसको एक टक हेराइ
आत्मा उज्यालो माग्दै थियो ।
See more by fucheketo
Visitor from US is reading एक रात दुइ कथा...
Visitor from NL is reading Tips for undergrad Nepalese student trying to apply for USA
Visitor from NL is reading पूजाकोठा को खलबल
Visitor is reading TPS without EAD card for opt student
Visitor is reading GoFundMe for देउवा पुत्र जयवीर
Visitor is reading TPS to Green card
Visitor is reading Visitor visa extension denied what to do
Visitor from US is reading नासिया (नेप्लिज एसोसिएसन इन साउथ ईस्ट अमेरिका) का मुर्ख महाम
[VIEWED 18479 TIMES]
Posted on 03-13-10 9:32 AM Reply [Subscribe]
फेरी चुरोट को धूवाँ रुमलियो कोठामा । मलाई त्यो मन पर्दैन । तर एउटा मात्रै मन नपर्ने कुरा उसको !! मैले छेवैको झ्याल खोलेँ । हावा धेरै नै उग्र भएर बग्ने हुनाले मैले बन्द गरेको । पौषको महिना को चिसो हावाको उग्र रुप म सहन सक्दिन । साना तिना ज्याकेट हरु छेडेर छिर्छ । म उसलाइ गाली गर्न सक्दिन तर , अनुहार सुख्खा मायालाग्दो छ , त्यतिसाह्रो बोल्दैन उ , उसलाई चुरोट छोड भन्न पनि सक्दिन दिनका चौध पन्ध्र वटा फुक्नेलाई म कसरी छुटाउन सकुँला र !!!
“दाइ म पहिला चुरोट खान्नथेँ !” उसले आजको तेस्रो चुरोट मा सँधै जसो भन्ने वाक्य दोहोर्यायो । मैले झ्याल खोलेको देख्यो शायद । उसलाई गलत गरिरहेको छु जस्तो पनि लाग्छ तर छोड्न नसकेको बाध्यता बताउँछ उ !!! ठूलो कुरा हैन सामान्यतय मान्छे नशामा बाध्य नै हुन्छ । आज पिउँदिन भन्छ , फेरि भोलि देखि छोड्छु भन्छ यसो सोच्दा जीवन पनि त नशा हो , जिउँदिन भन्ने धेरै मान्छे भेटिन्छन् , तर पनि मान्छे जीउन बाध्य छ ।
प्रतिक भन्छ नाम आफ्नो उ , घर कहाँ हो ठेगाना के हो चाहिने भए म काम गर्न सक्दिन भनेर भनेको थियो । पहाडको सानो बजारमा मेरो मोबायल मेन्टेनेन्सको सानो पसल मलाई किन चाहियो उसको घर ,ठेगाना , तर कुरा विश्वासको पनि त आउँछ , मैले थोरै हिच्किचाएर मात्रै हुन्छ भनेको थिएँ । तर आफ्नो काम मा विश्वासिलो छ उ , साथै दक्ष पनि ! म धेरै पैसा चाहिने भए सक्दिन मैले उसलाई भेट्ने बित्तिकै भनेको थीएँ ।चुरोट र खाना , कोठालाई पुग्ने भए पुग्छ उसले सँधै जस्तै रुखो स्वरमा भनेको थियो ।मलाइ थाहा थिएन उसको चुरोट को खर्च उसको खानाको भन्दा धेर हुन्छ । तर उसलाइ पुगेको छ , प्रतिकले कहिल्यै गुनासो गरेको छैन उसको तलबको बारेमा !
प्रतिक सामान्यतय दाह्री काट्दैनथ्यो पन्ध्र बाइस दिन मा काटेको बेला मलाई अचम्म लाग्दो लाग्छ उसको अनुहार , कपाल कोर्दैनथ्यो कपाल काटेको त मलाई सम्झना समेत छैन , उसले एउटा मात्र झोला बोकेर आएको थियो त्यति खेर । उसको जिन्स मैलो भए पनि महँगो जस्तो लाग्यो ।त्यो ब्राण्ड मैले काठमाण्डौ जाँदा देखेको जस्तो छ , ठूला बडाका छोराहरुले लगाएको जस्तो छ । झोलामा एउटा डियोड्रेन्ट ,अरु दुइ तिनवटा जिन्स र टिशर्ट रहेछन् अनि उसले लगाएको ज्याकेट !!!कपडाहरु मैलो भए पनि प्रतिक गन्हाएको भने थिएन ।
“केहि चोरी सोरी गरेर भागेको त हैन ?” मैले उसलाई नियाल्दै सोधेको थिएँ पहिला उ आएको बेला । आजकलको यो भिँडमा चिनेका मान्छेमा त उसको विश्वासको संकट छ झन उसलाइ त मैले पहिलो चोटी देखेको मात्र !तिँ माथि ठेगाना सोध्ने भए काम गर्दिन भन्छ ।
“तँपाईलाई म सँग शंका छ भने मैले हैन भन्नुको के अर्थ र ?” उसको रुखो आवाज एक दम नै गहिरो थियो त्यतिखेरको ।
मैले सोचे आखिर म दिन भर उ सँगै हुन्छु राती चाबी म सँगै हुन्छ उ मात्र काम गर्नेछ , काम आउँछ नै भने मैले अरू कुरा जान्नु को औचित्य छैन ! ठिकै भन्छ उ , प्रोफेसनल कुरा प्रोफेसनल नै हो ,पर्सनल कुरा पर्सनल नै मेरो दोकान सानो भएता पनि !!!
“ अहिले चाहिँ किन फुकेको फुक्यै गरेको चुरोट त ?” म सोध्न पनि सक्दिन , मलाई थाहा छ प्रतिक ले उत्तर दिने छैन । मलाई केटो सोझो पढेको लाग्छ । उ कम्प्युटर राम्रो चलाउँछ । तर उ किन यहाँ आयो यहाँ आएर के गर्न चाहन्छ मलाई थाहा छैन । मैले उत्तर खोजेको प्रश्न , मैले सोध्न नसकेको प्रश्न !!
उसलाई कोठा पनि मैले मिलाइदिए । यो बजार सानो छ मेरो पसल जस्तै । मैले सबैजसो घरहरु चिनेको छु । म यो सानो कुवाको ठूलै भ्यागुतो हुँ भनौँ न !राम्रै चलेको छ मेरो कारोवार , नेपाल मा मोबायल चाहिँ गाउँ गाउँ मा फैलिएर होला !!!इन्टरमेडियट पढेपछि मैले सजिलो स्वरोजगार रोजेँ एक्लै चलाउन गाह्रो गाह्रो थियो त्यति नै खेर प्रतिक हो आएको ! मैले हुन्छ भनेँ !!!! प्रतिक आजकल मलाइ दाइ भन्थ्यो , मलाई पनि विश्वास लाग्छ उसको !!!
उसको मोबायल मा फोन आउँदैन । उसको मोबायलमा सिम थीएन जब उ यहाँ थियो । आएकै दिन उ टेलेकम अफिस गएर नयाँ नम्बर लियो । मोबायललाई उसले गित सुन्ने भाँडो बनाएको छ , फोन आओस् पनि कसको , दोकानमा उ अघि नै आएर चियापसलमा चिया खाएर बसिराखेको हुन्छ म आइपुग्दा । मलाई चिया पसलेले भन्छ यति कम बोल्ने मान्छे मैले देखेको थिइन , “चिनी कम हाल्दिनु “ भन्छ रे प्रतिक कहिले काहिँ त्यो बाहेको अहिले सम्म प्रतिकले दोकानेलाइ अरु कुरा भनेको समेत याद छैन रे !! कहिले काहिँ उ पत्रिका हेर्छ रे दोकानमा तर अनुहारमा परिवर्तन नदेखेपछि म छुट्याउन सक्दिन उ राम्रो समाचार पढ्दैछ कि नराम्रो !!!
बाटोमा उ इयरफोन लगाएर हिँड्छ , यताउताका मान्छे संग बोल्न मन नलागेर होला । प्रतिकको एकान्तको साथी उ स्वयं आँफै होला । मान्छेको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो ,आफु भित्रको आफुलाइ साथि बनाउन सक्नु यसले घात हुने सम्भावना शुन्य हुन्छ आफ्नो एकान्त भोग गर्न सक्नु त्यसले मान्छेले भिँड खोज्दैनन् शहरको , अनि आफू भित्रको धुन गुनगुनाएर आफ्नो जीवनलाई एउटा गित जस्तो गाइरहन सक्नु प्रतिक ति थोरै मान्छे मध्येको एक होला !!!!
.............................. ...................... .......................... ............................... ............................. ...
“ प्रतिक चुरोट मात्रै पिउँछौ कि अरु पनि ?” एक दिन मैले उसलाई काम गर्दा गर्दै सोधेँ !त्यो दिन अघिल्लो दिन हामीले अलि ठूलै ब्यापार गरेका थियौँ । दोकान को साइज बढ्दै थियो भनौँ !!! मलाई उ सँग सेलेब्रेट गर्न मन थियो !
उ हाँस्यो मात्र ! अनि मलाइ हेर्दै भन्यो !
“ के फरक पर्छ र दाइ त्यसले मैले पिए पनि भोलि सुर्य उदाउनेछ , नपिए पनि !”
हामीले पिउनु र सुर्य उदाउन मा म केहि सम्बन्ध देख्दिन । हुन त उसले पनि देखेको छैन तर पनि उ जोडिदिन्छ । प्रतिकलाइ जब जब हेर्छु मलाई कहिले काहिँ चिसो कराइ मा हालेको तातो तेल मा पानी छुट्टिएर बसेको याद आउँछ उ सुक्न तयार छ तर घुल्न तैयार छैन !!!
“मलाई बेलुकालाई साथि चाहिएको !”
उसले मलाई हेर्यो । उसलाइ थाहा छ बेलुका म छेउछाउका भट्टिहरुमा कहिलेकाहिँ छिर्ने गरेको अनि रातभरको नशाले बिहान बिग्रेको अनुहार लिएर दोकान खोल्ने गरेको !!! सानो त बजार छ बेलुका मैले गरेको हल्ला पनि सुनेको छ होला !!!
“ मलाइ चुरोट नै ठिक छ दाइ !” उ फेरि आफ्नो काममा ब्यस्त हुन चाह्यो !
“ दाइ ले भनेको कहिले काहिँ मानी दिए नै पनि त के नै जान्छ र !”
“मलाइ भिँड मन पर्दैन दाइ , तिँ माथि त्यो नचाहिने गफ हुने ठाउँ !!!”
उसको कारण ठिक थियो हो उसलाई भिँड मन पर्दैन हो त्यो नचाहिने गफ हुने ठाउँ पनि हो !!!
“मैले खड्कालाई उसैको कोठामा सर्भ गरिदे भनेको छु हुन्छ भनेको छ !”
प्रतिक ले मलाइ हेर्यो ।अनि चुरोट झिक्यो । उसलाई खासै मन थिएन जस्तो छ । आज तर उसले मैले भनेको मानेको छ ।
ma tamarchu ki kyaho
Please log in to subscribe to ma tamarchu ki kyaho's postings.
Posted on 03-19-10 1:22 PM Reply [Subscribe]
……….हरेक केटो भित्र एउटा अचम्मको मान्छे लुकेको हुन्छ दाइ जसले नाता बुझ्दैन जसले स्त्री सँगको सम्बन्धको सामिप्यता के हो बुझ्दैन जसले केवल भौतिकता बुझ्छ ,शरीरको आवश्यकता बुझ्छ , एकान्तमा पुरा नहुने इच्छाहरुको पोको बुझ्छ हो
जीवनमा त्यो पनि अपरिहार्य होला दाइ शायद त्यसैलाइ हामी पुरुषत्व भन्छौँ……….....wa wa......waaaaa
Posted on 03-19-10 1:37 PM Reply [Subscribe]
भने पछि अनुभव बटुलना ठीक ठाउमा आये जस्तो छ, फुच्चे भाई संग. संगीताले सिकैदेलिनी| हैन त फुच्चे जी? कथा धेरैनै गहिरो ताल को छ. मैले भर्खर भर्खर मात्र शीर्षक र कथाको सम्बन्ध बुझ्दै छू. धेरै नारोकौ है फुच्चे भाई कथालाई|
Posted on 03-22-10 10:05 PM Reply [Subscribe]
Password , khushi , ma ta marchhu ki kya ho , Jhapali thito thanx for the responses...............
अन्य यो थ्रेड पढ्नु भएका साथीहरुलाइ पनि आभार प्रकट गर्दै
शब्दहरु फननन मेरो टाउको भरी घुमे !!! मान्छे परिवर्तन हुन समय चाहिँदैन । परिवर्तन र समय बिलकुलै भिन्न पाटा रहेछन् । परिवर्तन को अघि समय निरिह हुँदो रहेछ । त्यो कत्रो परिवर्तन थियो प्रतिकको मैले दाँज्न सकिन । कहिले काहिँ दाँज्नका लागि सारा परामिति हरु साना हुन्छन् । प्रश्न सोध्न खोज्दा आफुले ठड्याएको प्रश्नवाचक चिन्ह नै लिलिपुटको साम्राज्यको नागरिक जस्तो वाउन्ने लागेर आउँछ !!!!
......................... ............. ........................ .................... ..................... ..........
“सन्ध्या.................... मेरो जीवनको लागि त्यो नाम मेरो जीवनको प्रहर जस्तै थियो उज्यालो छरिएको मेरो जीवनमा पनि त रात पर्न पर्न लागेको थियो !”
प्रतिकले रात भने पछि मात्र मेरो ध्यान रात तिर गयो ।रातको करिव एक बजे जस्तो छ ! अब तारा हरु झर्न थाल्नेछन् एकैछीन मा ! मैले झरेका ताराहरुलाई जमिनमा भोलिपल्ट भेट्टाएको छैन त्यहि भएर तारा झर्छन् भन्ने कुरामा नै मलाइ विश्वास लाग्दैन ! तारा झरेको हामीले खुल्ला आँखाले देखेको भ्रम हो जस्तो लाग्छ ।मलाइ आज घडि हेर्न पनि मन छैन ।हुन त मैले घडि नहेर्नाले नै रात त रोकिन्न तर पनि म रात रोकिएको भ्रम पार्न चाहन्छु ।
संगिता दिक्क लागेर सुतिसकेको पनि धेरै भइसक्यो तर प्रतिक भने वहन छोडेको छैन आज !!!!मलाइ लाग्छ यो रात प्रतिकलाइ बहनलाइ नै बनेको हो ! सकियो कि सकियो कि जस्तो लागेको थियो मलाइ अर्को कथा तर उसले अब अर्को अध्याय प्रारम्भ गरेको थियो ! ति अन्तर्निहित दुइ अध्यायहरु कहिले जोडिने हुन् मैले त्यो खुट्याउन सकिन तर उसको कथामा उसको अन्तर्द्वन्दले अर्को पात्र छिरी सन्ध्या ! सन्ध्याको आगमन प्रतिकलाइ कुशल.... उसको शब्दमा ........... बनाउनलाइ भएको भनेर त भनि नै सकेको थियो !!!!
अब उ र म विचमा धेरै समानता देख्न थाले मैले उसले जे कारण देखाओस् उ एउटा पेशाले शरीरकि व्यापारीको मा धाउन तैयार भएको थियो कथा त्यो मोडमा आएपुग्दा मैले त्यो रातमा प्रतिकको कथा भित्र प्रतिकको धेरै रुपहरु देखेँ यो अन्तिम रुप करिव म सँग मेल खाने लाग्यो मलाइ ! अचानक प्रतिकको यो अवतार प्रति माया पनि जागेर आयो ! हो उसले ठिकै गर्यो तर अव उसले खुशीलाइ भन्नु हुँदैन उ स्वच्छन्द छ जव सम्म खुशी खुशी नै रहन्छे । भ्रम ,सत्य नैतिक अनैतिक सवै वाहियात कुरा हरु हुन् झुटको खेति हुन् ! मानिस नैतिक भन्दा पनि आनन्दित सन्तुष्ट हुनुपर्छ ।
.................................. ................................. ............................ ................
“ मेरो विवशता थियो भन्न म सक्दिन , मेरो मुर्खता थियो भन्ने मलाइ आँट छैन ,खुशीको लागि ल्याइएकी थीइ भनेर म कसरी भनुँ ! जे होस् सन्ध्याको उपस्थिति हजारौँ सम्भावनाको विचमा मेरो जीवनमा भयो....................
सन्ध्यालाइ पेशेवर भन्न मलाइ मन लाग्दैन ! खोइ उसको कोठामा आइरहने दुइ तिन जनाहरुलाइ ग्राहकनै भनौँ की के भनौँ । उसको भनाइ अनुसार उसलाइ भावनाहरु साट्न न आवश्यकता छ न रहर तर उसँगको सम्बन्धको पहिलो शर्त चाहिँ लोग्नेमान्छे भावनात्मक हुनु पर्छ रे !उसको भनाइ अनुसार जव सम्म लोग्नेमान्छेमा भावना हुन्न त्यो साँढे हो अरे अनि रातो वर्णकि उ लाइ देखेर गतिशिल भएर आउने साँढे थाम्न उसलाइ मन छैन रे ! डेलिकेट लोग्नेमान्छेहरु मात्र मन पर्छन् मलाइ भन्थी उ !!!! उ सँग शर्तको थुप्रो थियो । मानौँ हामी सन्धि गर्नलाई त्यहाँ पुगेको थियौँ ! चुरोट उसको सबैभन्दा ठूलो साथी थियो !
मेरो साथिले उसको कोठामा पुर्यायो मलाइ त्यो दिन ! गुलावि रंगको पर्दा हालेको , उसको कोठा अनि छेवैमा सटेको किचन ,कोठामैँ जोडिएको बाथरुम ! सन्ध्या शानका साथ बसेकी थिइ !!!!मेरो साथी भन्थ्यो सन्ध्याको आवश्यकता र सन्ध्याको महत्वाकांक्षाले पुर्याएको हो त्यो ठाउँमा सन्ध्यालाई !!! उ मान्छेहरुको भिँड रुचाउदिन थिइ ! दुइ चार जना थीए उसको आवश्यकता पुर्णकर्ता अनि ति पुर्णकर्ताहरुको लागि सन्ध्या नाम मात्र थिइन सबै थिइ भनौँ !
जानु भन्दा अघि म र साथी विच यो यात्राको गोप्यता र खुशी सम्म पुग्न सक्ने हल्लाहरुको कटौतिको बारेमा लामो छलफल भएको थियो !!!!”
प्रतिक चुप भयो । उसको कथामा विश्राम आएको छ अनि कोठामा धुवाँ !!!! पहेँलो वत्तिको प्रकाशमा धुवाँ तुवाँलो झै भएर फैलिन्छ ।
प्रतिकले अघि हामीले रित्याएको गिलास हेर्यो !
“जीवन यस्तै रित्तो भए कति रमाइलो हुन्थ्यो है दाइ ?”
“भन्नाले !” म कहिलेकाहिँ प्रतिकका कुराहरु बुझ्दिन उ यसरी शब्दलाइ रहस्य सँग रहस्यलाइ नाता सँग जोड्छ म चक्कराउँछु !कथा सरल छ उ सन्ध्या सँग रात विताउन चाहन्छ खुशी सँग दिन । मैले बुझेको त्यत्ति हो अचानक जीवन कसरी रित्तो भयो यो या त प्रतिकलाइ नै थाहा होला अथवा बोल्न र बुझाउन सक्ने भए त्यहि रित्तो गिलासलाई !!!
“ रिक्तता हुन्थ्यो अघाउन्जेल को रिक्तता न सम्वन्ध बन्थे , न सम्वन्ध टुक्रन्थे हामी रिक्तता नै भोग्थ्यौँ । रिक्तता को वजन हुँदैन नि दाइ , वजन नभएको कुरा कसैमाथी भार पनि त बन्दैन !!!”
उसले फेरि मैले नबुझ्ने कुरा गर्यो !!!मलाइ कथा सँग मतलव हुनाले मैले ते पनि आज उसका सारा शर्तहरु मानेको छु !!!
“ सन्ध्याको कोठामा म हुँदा म खुम्चिएको थिएँ , म बाँडिएको थिएँ टुक्राटुक्रामा एक भागमा मेरो पुरुषत्वको आधिपत्य थियो !एउटा भागमा खुशिको ! तेस्रो भाग अलि पृथक थियो उ सहि गलत छुट्याउनमा ब्यस्त थियो !”
“ अनि ?”
“ उ खुशि सँग दाँजिन लायक त थिइन सौन्दर्यको मामला मा तर आकर्षक बनौट ,रातो वर्णको छाला बाहेक केहि कुराले सन्ध्यालाइ अरु भन्दा भिन्न बनाउथ्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो पक्कै सन्ध्याका आँखाहरु थिए !!!! सन्ध्याका आँखाहरु गहिरा थिए कुनै पनि पुरुषको एक्सरे गरिदिन सक्ने । मलाइ लाग्छ उसले चाहेको खन्डमा जुन सुकै पुरुषलाइ पनि जुन सुकै रुपमा उभ्याउन सक्थी !”
मैले झल्यास्स सुतिसकेकी संगितालाइ सम्झेँ ! अघि मैले सोचेको मुल्यको कुरा सम्झे !!! परिभाषाहरु बदलिदै थिए के त्यो उसको विशेषता हो त त्यसो भए ???
“ उसले मलाइ धेरै बेर हेरेर मेरो साथिलाइ हेर्दै प्रश्न राखेकी थिइ उ यहाँ रहरले आएको कि तिमीले झुक्याएर लिएर आएको भनेर !”
झन्न मेरी संगिता त्यस्तो सोच्दिन मैले मनमनै सोचेँ । उ झुक्याएर आओस् रहरले आओस् मेरो विचारमा उ सशरिर त्यहाँ थियो त्यो रातको अन्तिम सत्य त्यहि थियो !!!
“त्यो तिमी उसलाइ नै सोध , म हिँडे भन्दै मेरो साथी वाहिर निस्कियो ! मलाइ अचानक निस्सासिए जस्तो भयो त्यहाँ !!! चिया खान्छौ भनेर सन्ध्याले सोधेको त्यो वातावरणलाइ हलुका बनाउन खोजेको होला शायद ।
मैले टाउको हल्लाएँ , मलाइ एकछिन भए पनि सम्हालिनलाइ समय मिल्नेछ भनेर !!! उ आफुमा बुझिनसक्नुकी थिइ , उसका शब्दहरु सँधै नै अचम्मलाग्दा हुन्थे !!!! मलाइ अझै याद छ धेरै बेर नियालेर उसले भनेकी थिइ म भाग्यमानी छु ,,, मान्छे कुमारत्व हार्न म सँग जुवा खेल्छन् !!! मलाइ अझै थाहा छैन उसले के नियालेर उसले मेरो कुमारत्वको बारेमा पत्ता लगाइ !! मेरो साथीले भनेको होइन त्यसमा मलाइ विश्वास छ !!! उसको सामु म आए उसले केहि भोगि मैले केहि पाएँ यसमा म कसरी हारेँ त ????यहाँ त हारजित काहिँ थिएन
तर खुशि लागेको पनि थियो मलाइ मेरो रुपलाइ म नामर्द को प्रतिमा बनाउन खोजिरहेको थिएँ त्यो कुमारत्व रहेछ सन्ध्याको परिभाषामा !!!!!”
“त्यो रात म पग्लेको रात गोधुली साँझ छरिएको रात सन्ध्या सन्ध्या केवल सन्ध्या भएको रात बन्यो !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
प्रतिकले रात वर्णन गरिसकेको थियो । कुर्सीमा कोल्टे फेरे मैले , कथामा प्रतिकले खोजेको अनुभव पनि लियो अब के छ त कथामा ??? सक्किने सक्किने भन्दै रात जस्तै गाढा भइ गुज्रेको छ प्रतिकको कथा बेलाबेलामा प्रतिककै नबुझिने शब्दहरु बाहेक ऐना जस्तो कथा थियो । दुइटा जड्याहा हरु झगडा गरेर वोतल फुटाएर छताछुल्ल भए जस्तो प्रतिक छताछुल्ल भएर पोखोएको थियो कोठामा !!!!!!!!!!!!!!!
................................................ ..................................... .............................................. ......................................... .......................।
“ विहानको किरण गुलावीपर्दा बाट सन्ध्याको कोठामा छिर्दै गर्दा मेरो आँखा खुल्यो , सुर्यका किरणहरु अचम्मका हुन्छन् जुन माध्यमबाट छिर्छन् त्यहि रुप धारण गरिदिन्छन् । मलाइ त्यो बिहान सुर्यका किरणहरु पनि गुलाबी लागेर आए !!! शायद म पनि त्यो किरणहरु जस्तै बन्दैछु सन्ध्याको एक रातले नै मेरो स्वरुप बदल्न खोजेको थियो !!! एउटा अनुभवको लागि आएको म फगत अनुभवको लागि सन्ध्या बनेकी हैन भन्ने लाग्यो !!! उ फरक छे , सुल्झेकी केटी मान्छेहरु मा चाहिने भन्दा बढि स्पष्ट , उ बजार मा बसेर पनि मुल्यवान लाग्थी , एउटा अनौठो आकर्षण बोकेकी थिइ भनौँ , अनि अचम्मको बौद्दिकता जसको अगाडी सबै भुइँ मै छरिए जस्तो लाग्ने अनि उसको अचम्म को पेशा जसले प्रश्नवाचक चिन्ह बोकेर हिँड्छ सँधै !!! किन भइ त सन्ध्या त्यस्ती !!! सोध्ने आँट म मा छैन किनकी सन्ध्याका शब्दहरु मलाइ घोचिरहन्थे उ भावनामा विश्वास गर्दिन रे !!!
त्यस दिन मेरो खोजको अन्त्यकर्ता , मेरो बोधिसत्वको सुत्रधार निर्वष्त्र तर पनि निष्फिकृ मेरो छातिमा हात राखेर सुतिरहेकी थिइ !मानौँ मेरो छाति एउटा पर्खाल हो जसभन्दा पारी मात्र दुखको सन्सार छ , कुरा काट्नेहरुको भिँड छ , मैले सबैबाट उसलाइ लुकाएको छु । केटी मान्छेको यो अनौठो गुण हुन्छ उनीहरु जतिखेर विश्वास जताए जस्तो भान मात्र पनि पार्छन् लोग्नेमान्छे हरु मख्ख पर्छन् उनीहरु जस्तो विश्वासिलो कोहि छैन भनेर ! लोग्नेमान्छे भित्र आत्मविश्वास रोप्नलाइ पनि आइमाइ चाहिन्छे अचम्म !!!!
मैले धेरै बेर उसलाइ नियाँले ! उसको अघिल्लो रातको कृयाकलापलाइ मान्छे सस्तो भाषामा जे भनुन , उ सँग आउने हरुले जे स्वरुपमा उसलाइ जे देखुन् उसले एउटा अन्तर्चेतना म मा भरिदिएकी थीइ !”
त्यस्तो पनि हुन्छ र !!!! मैले सोचेँ म सँग उसको भनाइ अनुसारको अन्तर्चेतनाको थुप्रो किन छैन त्यसो भए ????
.................................. ............................ ........................ ..................................
“ भुइँ भरी छरिएका मध्ये आफ्ना कपडाहरु टिपेँ जसलाइ मैले पत्र पत्र उक्काएको थिएँ हिजो !!! खुशीले आफ्नै हातले बुट्टा थपेको रुमाल मेरो पेन्ट खल्तिबाट बाहिर निस्किएको थियो । हिजो को सम्पुर्ण दर्शक थियो त्यो शायद !!! अचानक खुशिका ति लामा औँला बुट्टा बनाउन मा ब्यस्त भएको , उसको आँखा र मनको त्यो रुमालको बुट्टाको लागिको एकाग्रता मैले सम्झेँ । मैले हिजो रात देखी लगभग बिर्सिएकी मेरी जीवनकि असलि नायिका त खुशी पो हो त आखिर अचानक चेतना मा आयो मेरो !!!
सन्ध्याको बाथरुम मा मैले आफूलाइ नियाल्दा सन्ध्याका धेरै छाप भेट्टाए !!! अनि बिस्तारै आफ्नो हातले मेट्टाएँ !!! खोइ किन हो किन त्यो बाथरुममा ऐनामा मैले आफ्नो सट्टा खुशीका आँखाहरु देखेँ मैले , आँखा जुधाउन सकिन अनि हत्तपत्त बाहिर निस्किएँ !!!!”
उसले फेरि चुरोट झिक्यो , कथामा फेरी बिश्राम आउने बेला भएको रहेछ । उसमा पनि त बिश्राम चाहिएको छ यत्रो भार बिसाउन खोज्दैछ उ । होलान ति उसको जीवनको करिव दुइ तिन महिनामात्र होलान् तर उसको जीवन नै सुनाउँदैछ उ !
“मन का तरेली हरु अचम्मका हुन्छन दाइ , सत्य के हो कहिले काहिँ मनले छुट्याउन सक्दैन , माया के हो धेरै जसो मनले ठम्याउन सक्दैन ,स्पर्श मा थियो अथवा अन्तरंगि थियो माया मैले पनि छुट्याउन सकिन । सन्ध्या सँगको एक रात र खुशी सँगका कैयौँ पललाइ दाँज्नु मात्र पनि खुशीको अपमान होला त्यो !!!!!!!!!!! त्यो दिनको भोलिपल्टको खुशी सँगको भेटले मलाइ के बुझायो मैले खुट्याउन सकिन । त्यो दिन मैले आफुलाइ एउटा जिउमा रग रग हिँड्न चाहने किरा जस्तो पाएँ भने खुशीलाइ कुनै उज्याली अलौकिक परी जसलाइ म सपना मा मात्र कल्पना गर्छु । उसको देह यति कन्चन छ कि मैले छोएँ मात्रै भने पनि दाग लाग्नेछ ।उसको स्पर्श प्राप्त गर्न त मैले नुहाएर आउनु पर्ने छ !!!
मैले उसलाइ विश्वासघात नै त गरेको छु नि !!! अनि मेरो साथी मुर्ख हो त्यो जसले मलाइ त्यस्तो सुझाव दियो । जसको तराजुमा शरीर भन्दा धेरे भारको केहि छैन !!!”
म जस्तै रहेछ प्रतिकको साथी । प्रतिकले सँधै म जस्तै साथी हरु पाएको रहेछ मैले मनमनै सोचेँ । म मात्रै किन हरेक लोग्नेमान्छेको तराजु त्यस्तै हुन्छ । मलाइ थाहा छ प्रतिक जत्तिनै आफूलाइ अपवाद जनाउन खोजोस् । उसका भावना पनि केहि फरक छैनन् , उसको कथाको अनुवाद उ तिर ढल्केर मात्रै हो नत्र उसको पनि तराजु केहि फरक छैन । उ पनि उहि घेरा भित्रको लोग्नेमान्छे हो पक्कै पनि खुशी यति राम्री थिइ कि उ खुशीको तर्फबाट पनि सोच्न बाध्य थियो , खुशी यति अलौकिक थिइ कि खुशीका आकांक्षाहरु लाइ उसको रुपको ओजस्व मा उसले देख्न सकेन । खुशि टल्किएकि नै हुँदि हो जसले गर्दा प्रतिक ले खुशि भित्रका नबोलिएका आग्रहहरु देख्न सकेन ।अनि देख्दै नदेखेका आग्रहहरु त उ पुर्याओस् पनि कसरी ?............
उसको कथा मात्र त्यत्ति हो । सन्ध्यालाइ जब उसले खुशी सँग बिहान दाँज्न चाह्यो कहाँ त्यो बजारमा शरीर बेचेर बसेकी केटी , कहाँ खुशीको कौमार्य । जसलाइ उसले दैविक भनेको छ त्यो मात्र खुशिको कुमारित्व हो जसको अगाडी उ गलेको छ ।
मलाइ कथा बुझे जस्तो लाग्यो मन थोरै ढुक्क भएर आयो हो म गलत छैन किनकि म मात्र शरिर भोग्दै छु बिभिन्न पर्दा वाहिर भित्रका प्रतिबिम्बहरु सँग अनि एउटी प्रतिबिम्ब संगिता पनि शरिर भोग्दै छे अनुभवी पुरुषत्व सँग प्रतिक न खुशीको कौमार्य बुझ्दछ , न सन्ध्याको शरिर बाट उ तृप्त छ प्रतिक लाइ सन्तोक गर्न आउँदैन त्यति मात्र हो !!! नत्र त सरल थियो उसको जीवन उसले चाहेको खण्डमा !!!!!!!!!!!!! खुशि पनि थिइ सन्ध्या पनि थिइ उ सँग माया गर्न चाहे माया अनि शरिर लुटपुटाउन चाहेन शरीर !!!
मैले आफ्नै तरिकाले प्रतिकको कथामा अर्थ निकालेँ ! बिच्छेद हरु थपेँ त्यान्द्रा त्यान्द्रा रेशा रेशा खोलेर आखिरमा मैले सम्बन्धहरुलाइ सरल बनाएँ । उसले बुनेका शब्दहरु मात्र उसका मनका गाँठाहरु हुन भनेर पत्ता लगाएँ !!!
“ मैले बुझ्न सकिन दाइ म आखिर किन यति निच अनुभव गरीरहेछु दाइ आफुलाइ , त्यहि खुशी हो ,त्यहि खुशिकै लागि उठाएको कदम हो अनि त्यहि म हुँ तर मेरो मनमा किन उब्जियो त हिनताबोध , अचानक खुशी किन यति धपक्कै बली ?रापिली भइ कि मलाइ उसलाइ छुन समेत डर लागेर आयो !! टाढाबाट बसेर हेर्दा पनि किन ज्वालामुखि जस्तो देखिरहेको छु उसको मुस्कान जबकी उसको मुस्कान उत्तिकै शालीन छ !!!!!!!!!!!!!!!!”
“अनि ?” मैले ब्यग्रता पोखेँ
“ अब को छ त मेरो मनको यो अवस्था को बारेमा मलाइ बुझाउन सक्ने ? मेरो साथी भनाउँदो सहि थिएन यो त मलाइ थाहा नै भइसकेको थियो ! अचानक मेरो मनमा एउटा नाम आयो जसले मेरो यो स्थिति बाट मलाइ पार लगाउन सक्छ ! के हो त माया बुझाउन सक्छ , उसको सुल्झाइ मेरो लागि पनि काम लाग्न सक्छ !”
“को ?” मेरा निन्द्रा नपुगेका , नशा छोड्दै गरेका राता राता हुँदै गरेका ( यद्दपि मैले ऐना हेर्न पाएको छैन ! मैले मात्र आफ्नो आँखाको राप बाट अनुमान गरेको थिएँ ) उ तिर डोर्याउँदै सोधेँ !!!!
प्रतिक फेरि उहि बजार तिर डोरिएछ । त्यो एउटा नशा हो मलाइ थाहा छ । उसले शब्दका जाल जति बुनोस् !! कथाको सरलता त्यहि हो उ बानि परेको थियो त्यो रातको मादकताको अनि सन्ध्याको शरिरको !!!!!!!!!!!!!!
Please log in to subscribe to password's postings.
Posted on 03-22-10 10:45 PM Reply [Subscribe]
maja aayo padhna...la arko part rakhau chittai...
Please log in to subscribe to kukhura chor's postings.
Posted on 03-23-10 7:48 AM Reply [Subscribe]
Dammi chha. Thank you fucheketo. kata kata dev daas dev daas jasto chha.
Please log in to subscribe to khushii's postings.
Posted on 03-23-10 9:30 AM Reply [Subscribe]
Please log in to subscribe to perika's postings.
Posted on 03-23-10 11:41 AM Reply [Subscribe]
Feel sorry for Khusi
Posted on 03-23-10 1:50 PM Reply [Subscribe]
हुन त हिजो राती नै पढेको थिए .......... तर निन्द्राले गर्दा तिर्मिर झ्यायी भये को थियो ........
फेरी अहिले पढे .....
अझै पढ्ने रहर पुगेको छैन .....
अर्को भाग राख्दी हाले ..... पढेर मात्रा उठ्ने थिए क्यारे ....
Posted on 03-24-10 2:30 AM Reply [Subscribe]
सवैलाइ आभार प्रकट गर्दै...........
रात प्रतिकको आँखामा लागेको पट्टि जत्तिकै बाक्लो छ तर अब त हामी तेस्रो प्रहर मा पनि त छौँ अनि मलाइ विश्वास पनि छ भोलि बिहान अवश्य हुनेछ ।
प्रतिकको अवस्थाले मलाइ पहराको छाति चिरेर झर्ने झरनाको याद आउँछ उ लठारिन्छ कहिले यो पहरामा कहिले त्यो पहरामा निर्लज्ज भएर पहराहरु भिजाउँछ उसको उद्वेग नै उसको शक्ति लाग्छ त्यो झरना तर अन्तिम अवस्थासम्म उसलाइ थाहा हुँदैन उसले भिजाएका पहराहरु अनन्तकालसम्म त्यहिँ रहिरहनेछन् जव कि उ भाँसिदै जानेछ आफ्नै अन्तर्द्वन्दमा उसको भसाइ ति पहराहरु विचको रोजाइको अक्मक्याइ हो !!! प्रतिकलाइ म यो कुरा बुझाउन सक्दिन होला सन्ध्याको स्थान सन्ध्याको ठाउँमा छ उ जत्ति नै बौद्दिक देखोस् सन्ध्यावाट उसलाइ सन्ध्याबाट चाहिएको विचार हैन मात्र उसको भोकको लागि साध्य हो सन्ध्या जो प्रयोगको लागी बनेकी छे ।
थाहा छैन मलाइ प्रतिकले आफुलाइ कति धुवाँमा उडाएको छ । न उ सकिएको छ न उसका चुरोटका धुवाँ !!!!उसका कणकण हरु पातलिएका छन् यो कथा मलाइ सुनाउने क्रममा !!! मान्छेले आफूलाइ पोख्न सक्नु पनि सफलता हो ! कहिले मान्छेका भावनाहरु गाँठा पर्छन् , कहिले ठोस् हुने अडिग हुने प्रयास मा मान्छे आफै कसैले नदेख्ने डल्लो बन्छ । उसले पोखेको छ आफुलाइ !!!!
“ करिव त्यो दिन मैले झुट बोल्न मन नलागे नलागे पनि सतहि कुराहरु बोलेर सन्ध्याको मा करिव तिन बजे तिर पुगेँ !!!
सन्ध्याको कोठामा मेरो मुटुमा जस्तै ताला लागेको थियो ! मलाइ थाहा थियो उ पाँच बजे साँझमा मात्र आइपुग्छे तर मलाइ घडी हेर्न मन लागेन !! कहिलेकाहिँ मान्छेले सम्भावना दाँज्दैन , उसलाइ नहुने कुराहरु भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ! मान्छेको कमन सेन्सलाइ बाध्यताले जित्छ ब्यग्रताले जित्छ ! म दुइ घण्टा उसको कोठा अघि उभिएँ !!!
करिव पाँच बजे , जिन्सको हाफ पाइन्ट जस्का झुत्राहरु उसका शरीर सँग जिस्कँदै थिए र केहि लेखेको आकाशे टिशर्ट , ठूलो झोलासहित उ प्यासेजको अर्को कुनामा देखिइ !!!
म मुस्कुराउने प्रयास गरेँ तर मन गह्नुन्गो थियो जसले मुस्कान लाइ निस्सासिने गरी दबाएको थियो !!!”
........................... ............................. ........................ .............................. ............................ .......................... .......................... .........................।
“उप्स , खबर गर्नु पर्दैन ?” सन्ध्याले ढोकामा लागेको ताल्चा खोल्न आफ्नो झोला भित्र चाबी खोज्दै भनेकी थिइ । सन्ध्याको झोला भित्र म जस्तै अस्तव्यस्तता थियो कहाँ के छन् , के का लागि छन् अष्पष्ट , अब्यवस्थित !!
“ के आजको समय अरु कसैको लागि थियो !” मेरो मनमाँ त्यस्तै शंका पलाएको थियो ! मैले सोधेँ पनी सन्ध्या मुस्कुराइ ! दाइ उ एकदम गहिरो मुस्कुराउँछे ! उसको मुस्कानले रात नै वर्णन गर्न चाहे जस्तो !!!
त्यो दिन समय दिएकी रहिनछ !! मैले उसको मुस्कान उधारेर अर्थ निकालेँ !!
“ खाजा खान्छौ ?”
“ सन्ध्या मलाइ तिमीलाइ एउटा कथा सुनाउनु छ !!!” दाइ मैले तँपाइलाइ सुनाउने जस्तै कथाको शुरुवात गरेँ !!!
............................... ............................ ........................ .......................... ..................... ........................ ................................... ............................... ............................... .......
न म प्रतिकलाइ बुझ्छु अब न प्रतिकको कथालाइ !!! खोइ के हो के हो उसको कथा !!! उ पात्रलाइ नै कथा सुनाउँछ । पात्र त पात्र हो उसलाइ के थाहा कथा कतै बग्दैछ भनेर !! न उसले कथामा आधिपत्य जनाउन सक्छ न कथाका मोड हरुलाइ नियन्त्रणमा लिन सक्छ !! उ मात्र कथा सँग बाँधिन सक्छ कथा सँग बग्न सक्छ । सन्ध्यालाइ कथा सुनाउनुको के अर्थ र !!!
“त्यो रात केहि भएन त !” अब मेरो ब्यग्रताले सिमा नाघ्यो ! अघि मैले जुन सम्बन्धलाइ वानी नशा सँग जोडेको थिएँ गलत थियो । प्रतिकले कति चोटी गलत सावित गर्ने हो मलाइ यो कथा भरी न उसलाइ थाहा छ न मलाइ !!!
उसले टाउको हल्लायो !! अनि हाँस्यो
“ हुन त धेरै भयो दाइ तर तँपाइले भनेको केहि भएन !! मलाइ खुशीको दाँजोमा आफूलाइ उभ्याउनु थियो !!!”
“ अनि !” मेरो सोचाइ थकित भइसकेको छ । मैले गलेको मुद्रामा उसलाइ सोधेँ !!
सन्ध्याले मलाइ हेरिरही अनि म अझै खुशिको लायक भएको घोषणा गरी अन्त्यमा !!! उसले मेरो टाउको सुम्सुम्याइ आँशु भरीएका आँखाले मलाइ हेरीरही !!
म विहानै फर्किएँ !!!!!!!!!!!!!
“ अनि ?” मैले आफ्नो नियमित शब्द दोहोर्याएँ !
हफ्ता बिते खोइ कसरी बित्यो भनौँ दाइ ती हफ्ताहरु पनि खुशी उत्तिकै राम्री थिइ , शालिनता यथावत थियो ! एउटा तलाउ जस्तो जस्को शालिनतामा तरंग उत्पन्न गर्न लाइ मेरो मन ढुंगा हुनु पर्नेछ । मलाइ खुशीको लागि ढुंगे बन्न मन लाग्न छोडेको थियो । म पहिलेकै अवस्थामा आएँ !!!! म मात्र खुशीलाइ नियाल्थेँ ।उसका भाका हरु बुझ्ने प्रयत्न गर्थेँ ।
अनि सन्ध्या जसका गुणहरु अलग थिए !!! भाषा अलग थियो ! उ वाध्यताहरुलाइ पनि बानेर राख्थी !!! लाग्थ्यो सम्पुर्ण विश्वलाइ उसले चाहेको भरमा नचाएकी छे !!! म पनि त्यसै विश्वमा नाच्न चाहन्छु !!! सन्ध्याको बौद्दिकतामा कायल भएर !!
तर म दुवै जना सँग जोडिदै गएँ अनौठो रुपमा !!!म खुशी सँग हुँदा मन सन्ध्या संग हुन थाल्यो अनि सन्ध्या सँग हुँदा मन खुशी सँग हुन थाल्यो !!! एक दिन खुशीले मलाइ हेरेर मुस्कुराउँदै आफूले घरमा साहस गरेर भनेको सुनाइ !!! अनि घर जाने कुरा भयो उसको !!!!!
मैले बेलुका सन्ध्यालाइ त्यो कुरा सुनाएँ !!! अब सन्ध्याको र मेरो सम्बन्धको अन्त्य भएको सुनाइ सन्ध्याले !!!!!!!
मेरो कथामा एउटा अध्याय अन्त्य भयो दाइ अर्को शुरु हुन्छ भन्ने आशमा !!!!
................... ...................... ........................ .............................. ................................ ................... ....................... .......................... .......................... ..........................
कथा त सुखद छ अहिले सम्म !!! अब अरु कति ओटा घुम्ति छन् आखिर !!!
“ तर दाइ झुटको आधारमा मैले साँचो माया पाउनु न्यायोचित थियो त ?”
के खाले प्रश्न हो यो ! मैले देखे अनुसार उसले एउटा गल्ति गर्यो यदि उ खुशिब्रता नै हुन चाहन्थ्यो नै भने पनि ! यो साँचो झुटो मान्छे आफु रमाउनलाइ बनाएको कुरा हो । मान्छे जे मा रमाएको हुन्छ त्यहि सात्विकता हो यो विश्वमा !!
“ के तिमीले खुशीलाइ भन्यौ ? तिम्रो लागि म सन्ध्याको मा गएँ भनेर ? ” मेरो मनमाँ शंका पलायो!
उसले फेरि टाउको हल्लायो !
“ दाइ सन्ध्या र मेरो सम्बन्धलाइ नाम दिन सक्नुहुन्छ ?” उसले फेरि मेरो आँखामा आँखा जुधाउँदै सोध्यो !
के नाम दिउँ ? म त्यो सम्बन्धलाइ ! मैले अचानक प्रतिकलाइ आफुसँग दाँजे प्रतिक र सन्ध्याको सम्बन्ध लाइ म र संगिता सँग पनि त दाँज्न सक्दिन !!!
“ भयो दाइ मैले अहिले सम्म नबुझेको कुरा भयो छोडिदिनुहोस् !! खुशि सँगको त माया नै हो मलाइ अचानक सन्ध्यालाइ छोड्दै गर्दा ग्यान भएर आएको कुरा
मलाइ लाग्यो यी दुवै कथाहरु अब बेरिँदैछन् मेरो जीवनमा जसले जब घाँटी समाउनेछ म ति मध्ये एउटा पनि चुट्याउन सक्ने छैन !!!मेरो अन्त्य नजिकिँदै छ । अनि अचानक मैले कलम झिके खुशीलाइ एउटा लामो चिठ्ठि लेखेँ ! चिठ्ठिलाइ लुकाएँ , अनि मोबायल बाट एसएमएस गरेँ खुशिलाइ एउटा चिठ्ठी छ तिम्रो नाममा लुकाएर राखेको भनेर , मोबायल छोडेर !!!!!!!!!!!!! अनि हिँडे एउटा यात्रामा
म सँग शब्दहरु थिएनन् उसलाइ दिने ! प्रतिक ठिक भन्थ्यो जीवन रित्तो भए कति रमाइलो हुन्थ्यो सम्बन्ध माथी सम्बन्धका बोझ हुन्नथे !!
झ्याल फेरी खुल्यो , पहेँलो प्रकाश छिर्यो कोठामा !!!
मैले संगितालाइ बोलाएँ
“त्यो तेरो पल्लो गाउँको काले काले केटा सँगको हल्ला साँचो हो ?” उसले मलाइ अचम्म मानेर हेरी !!!!
“ चाँडो पढिसकेर बिहे गरीहाल त्यो सँग !!!”
मलाइ थाहा छैन मैले त्यस्तो किन भनेँ । प्रतिक ले मलाइ हेरिरह्यो ।मैले प्रतिकलाइ हेर्न सकिन । म उसको लागि भिँड बन्न चाहन्न उ रिक्तता चाहन्छ पुर्ण रिक्तता !!!!!!!
Posted on 03-24-10 8:16 AM Reply [Subscribe]
I have been thinking there are lots of unsaid stuffs compressed with the Pratik and the narrator. Is it me expecting more or the special narration? I can't figure out the reason.
Still thinking about the letter which was written by Pratik to khushee. Hope to read that letter sometime in the coming days if not in this story. he he.
Thanks Fuche for your awesome writing!
Posted on 03-24-10 10:35 AM Reply [Subscribe]
समाप्त त लेखिएको देखियो तर क्रेजी पर्मात्माले भन्या जस्तै, त्यो चिट्ठीमा के लेखियाथ्यो ढिलो चाँडो भये पनि हेर्न पाम।
धन्यवाद यस्तो राम्रो कथाको लागि! अर्को कथाको प्रतिक्षामा....
Posted on 03-24-10 12:36 PM Reply [Subscribe]
bhayena..kasto thau ma lerayera katha sakayeko?? aba arko katha kaile suru garne ta??crazy le suru gare pani hunthyo naya katha...
Posted on 03-24-10 1:01 PM Reply [Subscribe]
Awesome writing but khusi lie face nai garna nasakere letter lekhera hideko ho pratik??
what was in the letter??
Posted on 03-24-10 1:45 PM Reply [Subscribe]
"उ पात्रलाइ नै कथा सुनाउँछ । पात्र त पात्र हो उसलाइ के थाहा कथा कतै बग्दैछ भनेर !! न उसले कथामा आधिपत्य जनाउन सक्छ न कथाका मोड हरुलाइ नियन्त्रणमा लिन सक्छ !! उ मात्र कथा सँग बाँधिन सक्छ कथा सँग बग्न सक्छ । सन्ध्यालाइ कथा सुनाउनुको के अर्थ र !!!"
पात्र मात्र हैन पाठकको पनी टाउको फन फनी घूम्यो भन्या यू फुच्चे को काठ पढ्दा ता. ए हैन कस्तो सम्म लेखन सक्या भन्या? ल है चिठ्ठी माँ के छ मलाई पनी पढ्न मन लाग्या छ.
Posted on 03-24-10 11:43 PM Reply [Subscribe]
dherai ramro lagyo katha...
Posted on 03-25-10 9:43 AM Reply [Subscribe]
के लेखेको होला चिठ्ठीमा पढ्न पाए त ठिकै हुन्थ्यो तर बिचरी खुशी कस्तो भयो होला उसलाई चिठ्ठी पढेर अनी के गरी/सोची होली
Thank you very much for writing this story fuche jyu.
Please log in to subscribe to KAledai's postings.
Posted on 03-26-10 8:14 AM Reply [Subscribe]
किन नाम फुच्चे राख्या? हुन त धन बहादुर चै गरीब हुन्छन, शान्ती चै सधैं झगडालु त्यस्तै नाम राख्या होल्ला है?
तर mero नाम चै त्यस्तो छैनन नि ........
कसैले एउटा कथा लेख्न सक्या छैन एक रातमा, तपाईं भने एक रातमा २ वटा कथा। राम्रो कथा छ मैले खुसुक्क पहिले नै पढेको थिए तर केही बोलेको थिईन, अहिले त कथाको अन्त्य भै सक्या रहेछ, राम्रो लाग्यो।
कुनै नबोल्नी पात्रालाई पनि लोकल झोल पिलाएर बोल्ने बनाउनु लेखकको काइदा हो।
अरु कथाहरु पनि जाओस, चिठ्ठी पत्र खोल्ने प्रयास गर्नु होस।
Last edited: 26-Mar-10 08:56 AM
Posted on 03-26-10 3:53 PM Reply [Subscribe]
Mero pani Thank u hai...........thank you!!!!!!!!..........
Posted on 04-01-10 11:32 AM Reply [Subscribe]
thank u all...................त्यो चिठ्ठिको रहस्यमा अरु कुनै कथा नै थप्नुपर्ला जस्तो भयो !!!!